नेपाल भन्दापछि क्रिकेट खेल्न थालेको अफगानिस्तानले टि-२० शिरिज नै जित्यो !
काठमाडौं : अफगानिस्तानले जिम्बावेवि’रुद्धको तीन खेलको टी-ट्वान्टी सिरिज जितेको छ। आबुधाबीमा शुक्रबार भएको दोस्रो टी-ट्वान्टीमा ४५ रनले हराउँदै अफगानिस्तानले एक खेल अगाबै जि’म्बावेमाथिको सिरिज २-० ले आफ्नो बनाएको हो।
अफगानिस्तानले दिएको १ सय ९४ रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बावे १७ ओभर १ बलमा अलआउट हुँदै १ सय ४८ रनमा समेटियो। उसका लागि रायन ब्रुलले सर्वा’धिक ४० रन जोड्दा डोनाल्ड त्रिपानोले २४ रन बनाए। मुसा’कान्डाले २२ तथा रिचमण्ड मुतुमबामीले २१ रन बनाए।
जिम्माम्बेलाई सस्तैमा रोक्न अफगानि’स्तानका राशिद खानले ३ विकेट लिए। यस्तै मोहमद नाभी र नविन उल हकले समान २/२ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गु’माएर १ सय ९३ रन बनाएको थियो ।
उसका लागि करिम जनतले ५३ रनको अर्ध’शतकीय इनिङ्स खेल्दा उश्मान घानीले ४९ र मोहमद नाबीले ४० रन बनाए। जिम्बावेका मुजाराबानीले २ विकेट लिएका थिए। यस्तै रायन
ब्रुल, ड्रोनाल्ड त्रिपानो र रिच’र्ड नागाराभाले समान १-१ विकेट लिए। यसअघि जिम्बावेविरु’द्धको पहिलो टी २० खेलमा अफगानिस्तान ४८ रनले विजयी भएको थियो। यो जितसँगै अफगानिस्तानले ३ खेलको सिरिजमा २-० को जित निकालेको छ। ताजा खबर टिभि
२०७७ चैत्र १२, बिहीबार ०२:४७ गते 1 Minute 502 Views
दोस्रो खेलमा शतक बनाउन चुकेपछि यस्तो भन्छन् रोहित !
बधाई ! फ्लोरिडा ओपनमा सन्जीवलाई दोहोरो स्वर्ण ।
बधाई ! नेपालले बंगलादेशलाई हरायो, प्रिती र सविताले रचे इतिहास ।
आज चीनबाट नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले थप ४४ लाख खोप ल्याउदै ।